Ozugbo ị kpebiri iji ya | Ota Citizen's Plaza
Imeghari ime ụlọ
Ime ụlọ / ime ụlọ tii
Roomlọ ọzụzụ, egwuregwu tennis, tebụl tebụl
Mgbe ị na-eji nnukwu ụlọ nzukọ, obere ụlọ nzukọ, ebe a na-eme ihe ngosi, na ebe mgbatị ahụ
Ntinye, na mgbe ị na-eji akụrụngwa na ntụrụndụ ahụ elere anya na ọ dị mkpa na njikwa ụlọ ọrụ ahụ bụ, mgbe ị wetara akwụkwọ ndị na-esonụ otu ọnwa tupu atụmanya nke iji ụbọchị dịka iwu izugbe, biko gaa onye ode akwụkwọ na nzukọ.
Mmemme ma ọ bụ eserese na-aga n'ihu, mpempe akwụkwọ, atụmatụ nchekwa, tiketi nnabata (dị ka ihe atụ).
Na mgbakwunye na nke dị n'elu, ihe ndị mere na nnukwu ụlọ nzukọ ahụ bụ eserese ihe osise, eserese ọkụ, na ịse foto.
(Ọ bụrụ na ị chọpụtaghị ya, biko mee ka anyị mara aha onye na-elekọta ya na ozi ịkpọtụrụ ya.)
Mgbe ị na-eji ụlọ mmegharị ahụ, ụlọ egwu egwu, ime ụlọ nzukọ, ime ụlọ ndị Japan, ime ụlọ tii, ime ụlọ nka
Biko soro ndị ọrụ nwee nzukọ gbasara nhazi nke ime ụlọ ahụ na ihe ọghọm iji rụọ ọrụ opekata mpe ụbọchị 2 tupu ụbọchị eji.
Mgbe ị na-ere ngwaahịa
Biko dị njikere itinye akwụkwọ iche iche "Ngwa maka nkwado nke ire ere, wdg."
Ngwa ngwadoro ire ngwa ahịa
Akwụkwọ maka ọfịs gọọmentị dị mkpa, wdg.
Dabere na ọdịnaya nke ihe omume ahụ, ọ nwere ike ịdị mkpa iji gwa ụlọ ọrụ ọha na eze dị mkpa.
Biko lelee tupu oge eruo wee soro usoro ndị dị mkpa.
Iji oku, wdg. Yaguchi Fire Station Nnyocha Nkebi
2-5-20 Tamagawa, Ota-ku Ekwentị: 03-3758-0119
Nche wdg. Ikegami Police Station
3-20-10 Ikegami, Ota-ku Ekwentị: 03-3755-0110
Nwebisiinka Japan Music Copyright Association
JASRAC Tokyo Event Concert Alaka
Nippon Life Shinjuku West itlọ Ọpụpụ 10F Ekwentị: 03-5321-9881
Biko dee aha onye nhazi, ozi kọntaktị, wdg. Na akwụkwọ mmado, mpempe akwụkwọ, tiketi nnabata, wdg.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịpinye akwụkwọ mmado na mpempe akwụkwọ n'ime ụlọ nzukọ ahụ, biko mee ka anyị mara. Obughi na ihe omume emere na họtelu)
Biko mee ka anyị mata ebe ị ga - enwe ike biye akara ngosi ahụ n’ebe akpọrọ aha naanị n’ụbọchị mmemme ahụ.
Enwere ike izipu ozi banyere ihe omume n'efu na akwụkwọ akụkọ ihe ọmụma nke Ota Ward Cultural Promotion Association bipụtara na weebụsaịtị. (Dabere na ọdịnaya, anyị enweghị ike ịnabata ya)
Biko dejupụta fọm a họpụtara ma zigara ya onye na-elekọta ebe ahụ.
XNUMX ụlọ omume omume homepage omume ọmụma akwụkwọ ngwa
Banyere njikwa akụrụngwa
N'ụbọchị ojiji, biko chee ụdị nnabata ihu ojiji na tebụl nnabata na 1st floor floor tupu i jiri ụlọ ahụ.
Na nkwadebe maka ọdachi, biko mee ihe niile enwere ike dịka ntuziaka maka mgbapụ maka ndị ọbịa, kọntaktị mberede, enyemaka mbụ, wdg, site na isoro ndị ọrụ nwee nzukọ zuru ezu na ịnye ndị ọrụ nhazi.
N'okpuru Iwu Ọrụ Fire, biko gbasie ike nke ndị ọbịa.Enweghị ike iji ya gafee ike gị.
Ọ bụrụ na ihe ọghọm ma ọ bụ onye ọrịa, gwa onye ọrụ ahụ ozugbo ma soro ntuziaka ndị ahụ.
Biko rịba ama na họtelu ahụ abụghị maka izu ohi.
Onwere ebe umuaka no na ala ulo 1st na nke 3, yabụ biko gwa ndị ọrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ha.Biko jikwaa ya site na njikwa onwe onye ọrụ.
Mgbe ejiri ya, weghachite ihe eji eji eme ihe na steeti mbụ.Na mgbakwunye, biko kpachara anya na ị ga-ewere ihe nke aka gị laa n'ụlọ ma hapụ ha ebe ahụ.
Ọ bụrụ na akụrụngwa ma ọ bụ akụrụngwa mebiri emebi ma ọ bụ furu efu, a ga-akwụ gị ụgwọ maka mmebi ahụ.
Biko buru ulo mkpofu ewepụtara site na iri nri na ị drinkingụ ihe ọ ,ụ ,ụ, yana ihe mkpofu ewepụtara na ogbo ahụ.Ọ bụrụ na o siri ike iwere ya n'ụlọ, anyị ga-edozi ya maka ego, biko biko mee ka anyị mara.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ijikwa ebe ahụ, onye ọrụ nwere ike ịbanye n'ime ụlọ ị na-eji.
Onye nhazi ahụ nwere ọrụ maka ịhazi na ịduzi ndị ọbịa, ijide ya na ịnabata ndị ọbịa.Dabere na ihe omume ahụ, onye nhazi nwere ike ịkwadebe ndị ọrụ maka ebe a, ọkụ, ụda, wdg.
Ọ bụrụ na a na-atụ anya na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọbịa ga-abịa tupu oge mmeghe, maọbụ ọ bụrụ na enwere ike ịme mgbagwoju anya n'oge mmemme ahụ, ọ bụ ọrụ nke onye nhazi ịhazi ndị nhazi zuru oke.
Biko gbaa mbọ hụ na onye nhazi ahụ lebara ihe ndị na-esonụ anya ma gwa ndị ọbịa.
Edogidela akwụkwọ, teepu, wdg na mgbidi, ogidi, windo, ibo ụzọ, ala, wdg, ma ọ bụ kụọ ntu ma ọ bụ studs n'enweghị ikike.
Adịla ire ma ọ bụ gosipụta ngwongwo, kesaa okwu e biri ebi, ma ọ bụ mee otu ihe ọ bụla yiri na-enweghị ikike.
Ewetala ihe dị egwu ma ọ bụ anụmanụ (ma e wezụga nkịta ọrụ) na-enweghị ikike.
A machibidoro ịụ sịga n'ụlọ niile.Erila nri, a drinkụ ma ọ bụ anwụrụ ọkụ ma e wezụga na mpaghara ndị a họpụtara.
Emepụtala olu nke nwere ike igbochi njikwa nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ kpatara ndị ọzọ nsogbu.
Emela ka ndị ọzọ nwee nsogbu, dị ka mkpọtụ, iti mkpu, ma ọ bụ ime ihe ike.
Banyere ojiji nke ebe a na-adọba ụgbọala
Onwere onye nhazi puru iche na ala okpuru ala nke abuo. (Ogo dị elu 2m)
Anyị ga-enye gị onye na-ahazi tiketi ị na-adọba ụgbọala. (Ole na ole) A gaghị eji ya na-enweghị tiketi na-adọba ụgbọala.
Biko tinye akara ebe ị na-adọba ụgbọala na windo nke ụgbọ ala gị.
Enweghị ebe a na-adọba ụgbọala maka ndị ọrụ izugbe.
Onye nhazi ahụ kwesịrị ijide n'aka na ndị ọrụ izugbe anaghị abịa n'ụgbọala.
Biko si n'ọnụ ụzọ mbata banye na ala 1 nke ụkwụ.Biko jiri igwe mbuli elu ruo ụlọ nke ọ bụla.
Ọ bụrụ na i si na ebe a na-adọba ụgbọala banye na ala ala ala nke 2nd, ịnwere ike iji ngwaọrụ ịrịgo arịgo, ọ bụ ezie na enwere usoro. (Ibu ruru 150 n'arọ) Ọ bụrụ na ị kpọtụrụ anyị tupu oge eruo, onye ọrụ ga-anọ na njikere.
Roomslọ mposi nke ọtụtụ dị na ala 1st, na nnukwu ụlọ nzukọ nke 1, na nke 3.
Oche nkwagharị a na-akwụ ụgwọ n'ụlọ dịkwa na ụlọ ahụ, yabụ biko mee ka anyị mara ma ịchọrọ.